Astaamaha Ka Dhigaaya Gmail Mid Gaar Ah ▷ ➡️ Kuwa Raacaya ▷ ➡️
Cusbooneysiinta dambe Muddo intee le'eg ayay haysatay adeegga emaylka ee Google, waa in la meeleeyo Gmail. Emailada Gmail ayaa ah kuwa ugu isticmaalka badan uguna caansan adduunka iyadoo leh tiro ku habboon oo ah 600 milyan oo isticmaale.
Xilligan Gmail Way sii kordheysaa maalinba maalinta ka dambeysa, tanina waxay horseeday Google inay cusbooneysiiso interface-ka Gmail heer cusub, sida in lagu daro astaamo cusub aaladaha qaar oo ah noocyo cusub.
In kasta oo jiritaanka kale Madallooyinka fuliya adeegyada e-maylka sida Outlook, Microsoft, Yahoo Mail oo ay sii socdaan maanta, hase yeeshee uma eka inay bixiyaan kaydinta, raadinta iyo xallinta abaabullada sida Gmail ay samayso.
Si taas loo ilaaliyo faa'iidooyinka ayaa leh gmail iyo sida loogu guuleysan karo, Google iyada oo loo marayo bixinta dadka isticmaala waa inay iibiyaan xayeysiinta, geliyaan wararka sida ku xusan farriimaha emaylladooda, dejinta dallacsiinta, farriimaha ka-faa'iideystayaasha shirkadda si dib loogu eego.
Thanks to horumar in Gmail ku jirtay muddooyinkan, waxaan kuu soo bandhigeynaa, the
Astaamaha ka dhigaya Gmail mid gaar ah,
Helitaanka casuumaad: Isticmaale kasta oo cusub wuxuu casuumaad u diri karaa kooxo dad ah.
Kaydinta 2.5 GB: Inkasta oo aaladaha kale ee emaylku ay tahay inay tirtiraan emaylka si ay u helaan meel, Gmail waxay ku siinaysaa awood aad ku keydiso
Raadi: Si dhakhso leh oo fudud u hel ereyada muhiimka ah si aad u hesho emaylka aad rabto.
Dejinta muuqaal: Xulashada ay Gmail ka dhigeyso in ka isticmaale ahaan aad ku dhejin karto sawir asalka ah boostada oo aad u habeyn karto
Xisaabaadka loo igmaday; Waxaad marin uga heli kartaa saxaaradda shaqsiyeed, haddii ay tahay jawi shirkadeed, magacaabid ayaa loo sameeyaa dadka kale ee wax ku qora magaca shirkadda.
Qalabka Wadista iyo Dukumintiyada: Waxaad qaban kartaa shaqooyinka dukumiintiga ee ku kaydsan Google Docs.
macruufka ama Android: Waxaad ku isticmaali kartaa Gmail mobiladaaga sida qaab desktop ah.
Shaybaarada: Waa hawl aad ku joojin karto rarka 30 ilbidhiqsi laga bilaabo isla markii rarku ka baxay sanduuqa. Shaybaarada waxay leeyihiin liistada xulashooyinka aad ku hagaajin karto isku xirnaanta boostada.
Hangouts Fariin, GTalk: waxay ku siineysaa sheeko halkaas oo dadka isticmaala ay fariimahooda ugu diri karaan xiriirkooda oo ay wicitaano fiidiyoow ah sameyn karaan.
Abaabulaan emaylkaaga: Gmail wuxuu u ogolaanayaa adeegsadaha inuu u kala sooco e-mayladooda si habsami leh, u adeegsado qeybaha ay doorbidayaan sida Main, Dalacsiinta iyo Bulshadda ama uu ku daro wax badan oo ka mid ah hadba sida ay jecel yihiin.
Kuu ogolaanayaa inaad ka aamusto emaylka kooxda si aad uga fogaato waxyaabaha kaa mashquulinaya: Kuu ogolaanayaa inaad cusboonaysiiso fariin inta lagu guda jiro wadahadalka kaas oo aadan heli doonin ogeysiis toos ah.
Cod ka aamus ee emaylka.
Fur el fariin.
Guji ikhtiyaar "aamus"
Gmail waxay leedahay guddi Falanqeyn: Si aad awood ugu yeelatid ikhtiyaarkan waa inaad awood u yeelatid sheybaarada adoo gujinaya qaabeynta sheybaarada isla markaana hubi ikhtiyaarka si aad ugu suurto gasho inaad keydiso isbeddelada.